वीरेन्द्रनगरमा विकासका सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने भावना छैनः मोहनमाया ढकाल « Rara Pati
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सम्भावना, चुनौती, विकास, निर्माण , शिक्षा, स्वास्थ्य, कोरोना महामारीको प्रभाव र नियन्त्रण सम्बन्धमा नगर उप–प्रमुख मोहनमाया ढकालसँग रारापाटी डटकमले गरेको अन्तरवार्ताः
तपाईं निर्वाचित हुनु पूर्व र अहिलेको नगरपालिकाको अवस्थालाई कसरी चित्रण गर्नु हुन्छ ?
हाम्रो नगरपालिकामा काम गर्ने समयमा सत्ता पक्ष र विपक्षि भन्ने भावना देखिएको छैन । हामी विकासको लागि काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढेका छौं । हस्तक्षेपकारी भूमिकाभन्दा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने काम भएको छ । नगरको मुख्य समस्था र चुनौतिको रूपमा बढ्दो जनसङ्ख्या रहेको छ । जसका कारण अव्यवस्थित बसोबास पनि बढेको छ ।
निर्वाचन पूर्व नगरपालिका अस्तब्यस्त थियो । पुर्वाधार तर्फ नगरपालिका भित्रका जतिपनि सडकहरू थिए जिर्ण अवस्थामा थिए । रत्न राजमार्ग जिर्ण अवस्थामा थियो, चक्रपथको योजना थन्किएको थियो । सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था थिएन । शहरी स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा अनुरुप न पुर्वाधार थियो न सेवा नै । प्रदेशको राजधानी भइसक्दा पनि स्थानीय तहमा आउने अति न्यून बजेट थियो । स्रोत साधन न्यून थियो ।
स्थानीय सरकारको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि हामीसँग थुप्रै अवसरहरू आए । आफै राजश्व सङ्कलन गर्न सक्ने, ऐन नियम बनाउन सक्ने अधिकार भयो । त्यसबाट प्रदेश र सङ्घीय सरकार अन्तर्गत थुप्रै योजनाहरू लागु भए । स्थानीय विकासको योजना कार्यान्वयन हुँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्वरुप नै परिवर्तन भएको छ । मुख्यतः बाटोको बिकास, मर्मत, विद्युतिकरण, नगर विकासका अन्य योजनाको कार्यान्वयन भई विकास भएको छ । विद्यालयको स्वरुप फेरिएको छ । पर्यटकिय क्षेत्रको पनि डिपिआर तथा विकास, पहिचान भएको छ । शहिद पार्क बनेको छ । खानेपानि, कोहलपुर–सुर्खेत विद्युतिकरणको योजना, चक्रपथको योजना अघि बढेको छ । यसलाई राष्ट्रिय योजनाको रूपमा लिइएको छ । सङ्घीय सरकारले महत्वको रुपमा हेरेको छ । सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई पनि सँगै लगिएको छ । वीरेन्द्रनगरलाई महिलामैत्री नगर बनाउने कार्य अघि बढेको छ ।
नगरसभाबाट छोरीको लागि गर्वको शहर बनाउने कार्यक्रम पास भएकोछ । गर्भवति महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण, निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड तथा महिलालाई रोजगारको व्यवस्थाका लागि सिप दिइएको छ । अहिले १६ वटै वडामा स्वास्थ्य संस्था भवन बनाइएको छ सेवा दिइएको छ । न्यायिक समितिलाई चुस्त बनाइएको छ । न्यायिक समितिले सम्पूर्ण सूचक पुरा गरेको छ । स्रोत र साधनमा बृद्धि भएको छ ।
निर्वाचन ताका जनतामाझ गरिएका प्रतिवद्धता कतिको पुरा गर्नु भएको छ ?
निर्वाचन ताका वीरेन्द्रनगरलाई शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकिय सहर बनाउने नारा थियो । नगर स्वास्थ्य अन्र्तगत नगर अस्पताल बनाउने योजना अनुरुप अहिले नगर सभाबाट कटुकामा नगर अस्पताल बनाउने योजना अनुसार काम भएको छ । कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ । शिक्षा अर्को प्रतिबद्धता थियो । जसका लागि नगरपालिका भित्र विश्वबिद्यालय पनि छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति प्राथमिकतामा रहेको छ सोहि अनुरुप काम भएको छ । शिक्षाका गतिबिधिलाई निरन्तरता दिइएको छ । वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट जस्तै रेडियो, टेलिभिजन, यूट्युबबाट कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । सबै विद्यालयमा इन्टरनेट तथा कम्प्युटरको व्यवस्था गरिएको छ । दृष्टिविहिन र विपन्न विद्यार्थिहरूलाई रेडियो उपलब्ध गराउने योजना छ । खानेपानी, शिक्षा, स्वाथ्य, विद्युतिकरण, पुर्वाधार, न्यायका क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको छ । राजधानी केन्द्रित बिकास लागु भएको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भुमि व्यवस्थापनका लागि लगत संकलन गर्ने काम भएको छ । नगरसभाबाट पास भएको योजना यो बर्ष नै भूमिहिनहरूलाई लालपुर्जा दिने योजना, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने योजना छ । यसरी चुनावताका गरिएका प्रतिवद्धताहरू धेरै हदसम्म पुरा भएका छन् केहि पुरा हुने क्रममा रहेका छन् ।
नगरपालिकाको गर्व गर्न लायक नीति तथा कार्यक्रम के छ?
स्वास्थ्य संस्थाबाट १ जना महिलालाई महिनामा १ प्याकेट सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण, महिलालाई स्वास्थसँग जोड्ने काम, पाठेघर क्यान्सर परिक्षण, जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ परिक्षण, असाह्यलाई अभिभावकत्व तथा माध्यमिक शिक्षाको पहुँच, न्यायको लागि पिडितको पक्षबाट वकिलको व्यवस्था आदि निति तथा कार्यक्रम नगरपालिकाका लागि गर्ब गर्न लायकका कार्यक्रम हुन् ।
बाटो स्तरिकरण र निमार्ण महत्वका योजना, गुरु योजनाको काम यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने, अव्यवस्थित कित्ताकाट, प्लटिङ्गलाई व्यवस्थित बनाइएको, शिक्षामा प्राथमिकता दिई भवन निर्माण, वडा नं. १५ र १६ मा विद्युतिकरण, यातायातको सुव्यवस्था जस्ता काम गर्ब गर्न लायक कार्यक्रम हुन् । त्यस्तै सरकारी भवन अनिवार्य अपाङ्गता मैत्रि बनाउने, घरको नक्सा पास गर्दा भुकम्प प्रतिरोधात्मक घरको नक्सा मात्र पास गर्ने, १ घर १ रोजगारको नीतिको सकारात्मक प्रभाव, स्वास्थ्य संस्थाबाट १ जना महिलालाई महिनामा १ प्याकेट सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण, महिलालाई स्वास्थसँग जोड्ने काम, पाठेघर क्यान्सर परिक्षण, जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ परिक्षण, असाह्यलाई अभिभावकत्व तथा माध्यमिक शिक्षाको पहुँच, न्यायको लागि पिडितको पक्षबाट वकिलको व्यवस्था आदि निति तथा कार्यक्रम नगरपालिकाका लागि गर्ब गर्न लायकका कार्यक्रम हुन् ।
नगरपालिकाको विकासको प्राथमिकता कसरी तय गर्नु भएको छ ?
टोल, वडाबाट योजना माग गरी चरणवद्ध तथा प्रणालिगत रूपमा योजना तर्जुमा समिति हुँदै योजनाको प्राथमिकिकरण गरिन्छ । केहि नगर गौरवका योजना नगर सभाबाट पनि आउने गर्छन् । पुर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, स्वरोजगार, युवालाई नगर विकासको साझेदारी बनाउने निति, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा युवाहरूलाई सहभागिता, जनचेतनामूलक कार्यक्रममा पनि युवा समावेशिकरण आदि नगरको मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् ।
तपाईंहरूको कार्यकाल सकिँदैछ, यसपछिका विकास निर्माणका कार्ययोजना कसरी बनाउनु भएको छ ?
योजना बनिसकेका पुरा नभएका बाँकी गर्नुपर्ने काम पुरा गर्ने योजना छ । प्रदेश राजधानी भएकोले तिब्र रूपमा बढेको जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित बनाउने योजना छ । भौतिक निर्माण, सुकुम्बासी समस्या, खोला किनारका क्षेत्रको वस्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढेको छ । सिटी बसपार्कलाई नयाँ वसपार्कको रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको, रत्न राजमार्गमा बस्ति बिकास गर्ने योजना नै आगामी दिनका कार्य हुन् ।
तपाईंको नगरपालिकामा काम गर्दा सत्ता पक्ष र बिपक्षि पार्टीको सम्बन्ध कस्तो छ ?
हाम्रो नगरपालिकामा काम गर्ने समयमा सत्ता पक्ष र विपक्षि भन्ने भावना देखिएको छैन । हामी विकासको लागि काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढेका छौं । हस्तक्षेपकारी भूमिकाभन्दा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने काम भएको छ ।
कोभिडको प्रभाव नियन्त्रणका लागि कसरी काम गर्नु भएको छ ?
विश्वव्यापी रूपमा कोभिडले सबैलाई आक्रान्त पारेको बेला हामीले क्वारेन्टिनको व्यवस्था, होल्डिङ्ग सेन्टरको व्यवस्था गर्यौं र धेरैभन्दा धेरै जनतालाई सेवा दिने प्रयास गर्यौं । राहत वितरण, महामारीमा निःशुल्क कोभिड परिक्षणका कारणले महामारी निवारणमा सहयोग पुगी धेरै फैलन पाएन । दोस्रो चरणमा २५ सैयाको अक्सिजन सहितको कोभिड अस्पताल बनायौं । कोभिडको तल्लो स्तरदेखिको हेरचाह, रिफर, घरमै स्वास्थ्यकर्मीले भेटघाट गर्ने कार्यक्रम अनुरुप कोभिड नियन्त्रण गर्न सफल भयौं र सँगसँगै अन्य कार्यक्रमलाई पनि अघि बढायौं ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मुख्य समस्या र चुनौति के हुन् ?
नगरको मुख्य समस्था र चुनौतिको रूपमा बढ्दो जनसङ्ख्या रहेको छ । जसका कारण अव्यवस्थित बसोबास पनि बढेको छ । स्रोत साधनको अभाव छ जनताका आकाङ्क्षा धेरै छन् । कोभिडका कारणले पूर्वाधारको काम गर्न चुनौति भएको छ । एयरपोर्ट सञ्चालन हुन नसक्नु पनि हाम्रो लागि चुनौति भएको छ ।
आफ्नो कार्यकालको कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
हाम्रो स्थानीय तहका सम्पुर्ण ऐन, नियम बनेका छन् । बजेटको अधिकतम सदुपयोग भएको छ, फ्रिज गएको छैन । समग्र रूपमा म आफ्नो कार्यकालको कामबाट सन्तुष्ट छु ।
हाम्रो स्थानीय तहका सम्पुर्ण ऐन, नियम बनेका छन् । स्रोत साधन जुटाएर काम गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर बजेटको अधिकतम सदुपयोग भएको छ, फ्रिज गएको छैन । बजेट तथा योजना कार्यान्वयन भएको छ अन्य स्रोत र साधनको खोजीमा छौ । समग्र रूपमा म आफ्नो कार्यकालको कामबाट सन्तुष्ट छु ।
उप मेयरको छुट्टै विशेष कार्यक्रमहरू पनि छन् कि ?
लैङ्गिक बजेट, महिला, जेष्ठ नागरिक स्वाथ्य, रोजगार, सेफ हाउस निमार्ण, जेष्ठ नागरिकका लागि प्रत्यक वडामा दिवा सेवा कार्यक्रम मेरो मातहतका छुट्टै कार्यक्रम हुन् ।